Global Voices teny Malagasy » Nandresy Taorian’ny Fahafatesany ireo Mpanao Gazetin’ny Népszabadság, Gazety Hongroà Iray Nakatona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Febroary 2017 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra Marietta Le Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ny ekipan'ny Népszabadság. Nahazoana alàlana avy amin'ny pejy Facebook-n'ny ekipa mpamoaka lahatsoratra “Népszabi ” .
Namoaka didy ny fitsarana Hongroà fa tsy ara-dalàna ny fanakatonana tampoka ny gazety mpanohitra be mpamaky mivoaka isan'andro Népszabadság tamin'ny volana Oktobra, satria tokony nikaondoha niaraka tamin'ny komitin'ny mpiasa aloha ny tompony mba ahafahana manohy ny famoahan-dahatsoratra sy mba hialana amin'ny fandroahana ny mpiasa rehetra.
Nakaton'ny tompony, ny vondrona Aotrisiana Mediaworks, tamin'ny 9 Oktobra 2016 tsy nisy filazana mialoha ny gazety ary nilaza fa ny fahavitsian'ny mpividy azy no anton'izany. Tamin'io maraina io, tsy navelan'izy ireo hiditra tao amin'ny faritra ireo mpiasa izay gaga tokoa .
Nihoby ny fanapahan-kevitry ny fitsarana  ho “mari-pandresena aoriam-pahafatesan'ireo mpanao gazetin'ny Népszabadság” ny Reporters Sans Frontières (RSF). Araka an'i Pauline Adès-Mével, filohan'ny biraon'ny Vondrona Eoropeana ao Balkans RSF :
” Fandresena ara-maoraly ho an'ny ekipan'ny Nepszabadsag izany, na dia nampalahelo aza fa tsy voasazy tamin'ny heloka bevava na nahazo sazy ara-bola avy amin'ny didim-pitsarana ny tompon'ny gazety. Mazava tsara ny didin'ny mpitsara fa tsy voatery nakatona ny gazety na noroahana ny mpiasa miisa 90 raha nohajaina ny fomban'ny asa.”
Tsy nahitana torohay azon'ny daholobe nojerena ny fanambarana fanapahan-kevitry ny fitsarana raha nandray karazana onitra noho ny voina nihatra taminy ireo mpanao gazety .
Mpanao gazety Hongroà Anita Kőműves. Sary nahazoana alàlana .
Mpanao gazety ao amin'ny sampana raharaham-bahinin'ny Népszabadság nandritra ny 11 taona i Anita Kőműves, ary mpanangom-baovao momba ny politika Amerikana izy nanditra ny dimy taona mndra-pahatonga ny fikatonan'ny gazety. Anisan'ny ekipam-panadihadiana tao amin'ny gazety ihany koa izy: manambara ny tena fandaniam-potoanan'i Hongria amin'ny lobbying any Washington  ny iray amin'ireo tantarany .
Nilaza tamin'ny Global Voices izy fa mampiseho firaisankina amin'ny mpiasan'ny Népszabadság ireo mpanao gazety avy amin'ny sehatra fampitam-baovao hafa – elatra ankavia sy ankavanana (afa-tsy ny farany havanana). Nilaza i Kőműves fa avy amin'ny fanovan'ny governemanta tanteraka ny tontolon'ny fampitam-baovao tao Hongria hatramin'ny nanombohan'ny governemanta niasa tamin'ny taona 2010 no nitsanganan'izao firaisankina goavana izao. Nanova ny lalànan'ny fampitam-baovao Hongroà ny governemanta, anisan'izany ny fandroahana  mpiasa miisa 1.000 mahery tao amin'ny orinasan'ny haino aman-jerim-panjakana, sy ny fandroahana  ny toniandahatsoratry ny tranonkalam-baovao malaza Origo.hu taorian'ny namoahana tantara iray momba ny fandanian'ny sekreteram-panjakana nandritra ny nataony.
Tsy nieritreritra mihitsy izahay fa hanova zavatra ny didim-pitsarana, toy ny fandresena ara-maoraly kosa izany izay milaza fa tokony nanana solontena ara-dalàna niaraka taminay izahay ary tokony nisy ny fifandraisana mivantana mikasika ny zava-mitranga. Fantatray fa tsy hanova na inona na inona izany satria efa nifarana ny marainan'ny 9 Oktobra 2016 ny tantara.
Maro ireo Hongroà no manontany matetika ny momba ny hoavin'ireo mpanao gazetin'ny Népszabadság teo aloha. Nanomboka niasa ho an'ny vaovao an-gazetiboky Vasárnapi Hírek i Anita Kőműves vao tsy ela akory izay, kanefa mbola maro amin'ireo mpiara-miasa taminy no mbola eo am-pitadiavana asa:
Nanomboka nieritreritra amin'ny hanokafana seha-baovao hafa izahay raha vao nikatona ny gazety, na io pirinty na an-tserasera. Kanefa fantatray fa mila vola be ny mamelona biraom-baovao ho an'ny olona miisa 80. Na izany aza, nanomboka niresaka tamin'ny mpampiasa vola matanjaka teto Hongria sy iraisam-pirenena izahay, saingy tena vao haingana, tany ho any amin'ny fiandohan'ny volana Janoary tany no nahatsapa [izahay] fa tsy hahatakatra ny vola hiaingana na dia asa kely kokoa aza .
Gazety Hongroà lehibe iray miandany amin'ny ankavia , izay midika hoe Fahafaham-Bahoaka, ny Népszabadság ary naorina nandritra ny Revolisiona Hongroà tamin'ny taona 1956 . Lasa gazety tsy miankina izy nandritra ny taompolo 1990, ary niova imbetsaka ny tompony, mandra-pahatonga ny nitantanan'ny Mediaworks azy tamin'ny taona 2015.
Niteraka fihetsiketsehana goavana tao Budapest  ny fanakatonana ny gazety. Roa herinandro sy tapany tatỳ aoriana, nivarotra ny Népszabadság tamin'ny Opimus Press  , vondrona fampitam-baovao iray an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny praiminisitra ao Hongria, Viktor Orbán, ny tompon'ny Mediaworks.
Nitatitra  ny Reuters fa anisan'ny paikady iray napetraky ny mpiara-dia amin'i Orbán mba hanjakazakana amin'ny tontolon'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fiarovana “tambajotra fampitam-baovao am-pirahalahiana” ity fividianana ny gazety ity. Tsy mbola nitantana sehatra fampitam-baovao mihitsy ilay tompony vaovao .
Novelomina indray ny tahiry nomerikan'ny gazety volana maromaro taorian'ny fipoahan'ny vaovao. Ankehitriny, azon'ny rehetra jerena ireo lahatsoratra farany, ahitana ny lahatsoratra tamin'ny taona 2008 izay nosoratan'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity mikasika ny Fihaonana An-tampon'ny Global Voices tany Budapest  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/19/95042/
 Nihoby ny fanapahan-kevitry ny fitsarana: https://rsf.org/en/news/hungary-symbolic-posthumous-victory-nepszabadsag-journalists
 lobbying any Washington: http://nol.hu/belfold/orbanon-mar-a-penz-sem-segit-illiberalisnak-tartjak-teljesen-leirtak-1609073
 lalànan'ny fampitam-baovao : http://gawker.com/editor-of-hungarian-news-site-fired-after-critical-gove-1587023242
 Revolisiona Hongroà tamin'ny taona 1956: https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1956
 fihetsiketsehana goavana tao Budapest: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/09/protests-in-hungary-at-closure-of-main-leftwing-opposition-newspaper
 nivarotra ny Népszabadság tamin'ny Opimus Press: http://dailynewshungary.com/opimus-press-buys-nepszabadsag-publisher-mediaworks-hungary/
 Fihaonana An-tampon'ny Global Voices tany Budapest: http://nol.hu/archivum/archiv-497406-296326